इन्जिनियरहरुको पेशागत स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान, समृद्धि र स्थायित्वमा भूमिका बढाउन मेरो उम्मेदवारी - Himal Live- Leading News Portal from Nepal
४ फाल्गुन २०७५, शनिबार १५:०१
हिरेन्द्रमान प्रधान, अध्यक्षका प्रत्यासी,
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसन
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनमा तपार्इको उमेदवारी किन ?
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनको स्थापनाकाल देखि नै सक्रिय रहँदै आएको छु । विभिन्न तहमा इन्जिनियरहरुको नेतृत्व गरिसकेको छु । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसन (नेइए)को मान्यता ‘ज्ञान नै शक्ति ,श्रम नै भक्ती’ लार्इ थप प्रभाबकारी बनाउँदै लोकतन्त्र, पेशागत स्वतन्त्रता , इन्जिनियरहरुको आत्मसम्मान, दिगो समृद्धि र स्थायित्वमा इन्जिनियरहरुको भूमिका बढाउनका लागि मैले लोकतान्त्रिक प्यानलको नेतृत्व गर्दै उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनमा लोकतान्त्रिक प्यानलले हालसम्म ३१ मध्ये २९ वटा कार्यकालमा निर्बाचित भएको इतिहास छ । यति धेरै पटक लोकतान्त्रिक प्यानलले नेतृत्व गर्दा के उपलब्धि गरेको छ ?
लोकतान्त्रिक समूहबाट नेतृत्व गरेर निर्बाचित अग्रज तथा साथीहरुले निकै राम्रा राम्रा कामहरु गर्नु भएको ईतिहास छ । नेपालमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्नेदेखि बिपतमा परेका इन्जिनियरहरुको उद्दार र इन्जिनियरबिरुद्द गरिएका षडयन्त्रहरु चिर्न सफल भएको सबैलाई थाहा नै छ । त्यसैगरि नेइएको बिशाल भवन निर्माण, अध्ययन अनुसन्धानको विकास, देशैभरि च्याप्टरहरु गठन गरि संस्थालार्इ बलियो बनाउने काम यो अवधिमाा भएको छ । जहाँ २७ हजार इन्जिनियरहरु आबद्द भइसकेका छन । इन्जिनियरहरुमाथी हुने पेशागत असुरक्षा होस् वा भौतिक असुरक्षा नेइएले बलियो ढँगले इन्जिनियरहरुको पक्षमा उभिएको छ ।
नेइएले २०७२ को भुकम्पपश्चात हजारौं घरहरुको आरभीडीए सम्पन्न गरेर लाखौ मानिसहरुलाई सुरक्षित घरको बारेमा सचेत गराएको छ । पुनर्निर्माणमा आन्दोलनरत इन्जिनियर्सको माग पुरा गराएको छ । नेपाल भ्यालुयर्स एसोसियसनसँग मिलेर थुनामा परेका इन्जियरको रिहा गराइएको छ । आइटी अफिसरको सन्दर्भमा सबै बिश्वबिद्यालयको मान्यता र इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरलार्इसमेत अबसर दिने बाताबरण बनेको छ । जसबाट ३ सय इन्जिनियर लाभान्वित भएका छन् । थुप्रै इन्जिनियरिंग प्रोफेसनल संस्थासँग समन्वय गरिएको छ । युवाहरुको लागि बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर मार्फत काम गरिएको छ । विगतमा नेतृत्व गर्दा लोकतान्त्रिक प्यानलले समग्र इन्जिनियरिङ क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण कामहरु सम्पादन गरिसकेको छ । बिधान संसोधन गरेर संघिय ढाचामा नेइएलाई रुपान्तरण गरि कार्यन्वयनमा लागेको छ । पहिलोपटक देशैभर संघीय ढाँचाबाट नेइएको निर्वाचन हुँदैछ । संगठनलाई संस्थागत गर्ने , इन्जिनियरहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेदेखि उनीहरुका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता थुप्रै उपलब्धिहरु हाम्रो नेतृत्वमा नेइए हुँदा भएको छ । इन्जिनियर साथीहरु जानकार नै हुनुहुन्छ ।
नीतिगत सहमति भएको र निर्णय हुन बाँकी इन्जियारिंग स्टाफ कलेजलाइ कार्यन्वयनमा लैजाने, फ्रेस तथा युवा इन्जिनियरहरुलाई कम्तिमा १०% को सँख्यामा विभिन्न आयोजनामा संलग्न गराउनुपर्ने, इन्जिनियरहरुलाई सरकारी निकायमा नेतृत्व तहमा बसेर काम गर्ने अवसर दिलाउने, दरबन्दी सिर्जना गर्न पहल गर्ने, इन्जिनियरको बिमा, रोजगारी र सुरक्षामा हाम्रो जोड रहन्छ ।
३२ औं कार्यकारिणीको निर्बाचनमा तपाईंहरुको मुख्य एजेन्डा के के छन् ?
हामीले घोषणापत्र मार्फत उपलब्धि र आगामी एजेण्डाबारे प्रकाश परिसकेका छौ । केहि महत्वपूर्ण बिषयहरुमा हामीले इन्टर्नसिपलाई बिशेष महत्व दिएका छौ । नीतिगत सहमति भएको र निर्णय हुन बाँकी इन्जियारिंग स्टाफ कलेजलाइ कार्यन्वयनमा लैजाने, फ्रेस तथा युवा इन्जिनियरहरुलाई कम्तिमा १०% को सँख्यामा विभिन्न आयोजनामा संलग्न गराउनुपर्ने, इन्जिनियरहरुलाई सरकारी निकायमा नेतृत्व तहमा बसेर काम गर्ने अवसर दिलाउने, दरबन्दी सिर्जना गर्न पहल गर्ने, इन्जिनियरको बिमा, रोजगारी र सुरक्षामा हाम्रो जोड रहन्छ । इन्जिन्यरिंगसँग सम्बन्धित क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्ने विषय हाम्रा एजेण्डामा छन् । हामी आफुले गरेका प्रतिवद्धताप्रति इमान्दार छौं । निर्वाचनमा मतका लागि सस्तो र लोकप्रिय नारा दिएका छौं । जे जे गर्छौ भनेका छौं,त्यो गर्छौ ।
३२ औं कार्यकारिणीमा लोकतान्त्रिक प्यानल र हिरेन्द्रमान प्रधान नै किन ?
पहिलो त मेरो टिम समाबेशी छ । योग्य , अनुभवी तथा युवा जोशबाट सन्तुलित, पर्याप्त समय दिन सक्ने र नेतृत्व गर्न सक्नेहरु इन्जिनियरहरु समुहमा हुनुहुन्छ । दोस्रो कुरा हामीले विगतमा गरेका कामका उपलब्धिको थप विकास गर्नुपर्नेछ । हाम्रा नयाँ एजेन्डा कार्यन्वयनमा लैजानुपर्ने छ । मेरो ४० बर्षको प्राध्यापन, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिताको अनुभब , ब्यबसायिक नेतृत्व , योजना आयोगको नेतृत्व तहमा काम गरेको अनुभव छ । त्यसलाई म समग्र इन्जिनियरिङ क्षेत्र, इन्जिनियर र समग्र देशको हितमा लगाउन चाहन्छु । पक्कै पनि विगतमा हामीले गरेका काम र भोली पनि धेरै कुरा गर्ने सामथ्र्यसहितको हाम्रो टिम छ । त्यसकारण पनि पुन लोकतान्त्रिक प्यानल नै निर्बाचित हुनु स्वाभाविक छ भन्ने लाग्दछ ।
हामी निर्वाचनको सम्मुख आइसकेका छौं । “इन्जिनियरको नेतृत्व, दिगो समृद्दी तथा स्थायित्व” को मूल मन्त्र बोकेको लोकतान्त्रिक प्यानललार्इ मङ्सिर २८ मा हुने निर्बाचनमा बिजयी गराउनु हुन देशैभरका सम्पुर्ण इन्जिनियर साथीहरुसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु ।